अब सिटौला र बिश्वप्रकाशको भबिस्य के होला ? - BirtaJyoti
adminDecember 10, 2017 12:00 am 0
देशैभरीको चुनाबी परिणाम आइरहेको बेला झापामा बाम्पन्थीहरुले पूरानो बिरासतलाई फर्काएका छन् । ०४८ सालमा पनि यहाँका कम्युनिष्टहरुले यसरी नै बिजयको माला पहिर्याएका थिए ।
तर, यसपटकको बिजयले नयाँ ढोका खोलेको मात्र छैन । नयाँ क्षितिजलाई उघारेको छ । जस्तो की अब बन्ने सरकारको प्रधानमन्त्री केपी ओली बन्ने छन् । दोस्रो पटक ओली प्रधानमन्त्री बनिरहँदा झापामा भने काग्रेसको हबिगतले भने किचलो थपेको छ ।
समानुपातिक सूचिमा पहिलो नम्बरमा समेटिए पनि पार्टीको त्यस निर्णयलाई लत्याएर चुनाबी मैदानमा उत्रिएका काग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र बिश्बप्रकास शर्माको परायजले काग्रेसका कार्यकर्तामा निरासा मात्र चुलिएको छैन । आक्रोस मिसिएका अभिब्यक्ति पनि छचल्किएका छन् ।
अब सिटौलाको भबिस्य के होला ? उनले काग्रेस भित्रको अलग धारलाई कसरी नेतृत्व गर्लान् ? यो प्रश्नको जवाफ सिटौलाको भबिस्यले नै देला । तर, झापाबाट बिश्बप्रकाशहरुले दोस्रो पटक हारिरहँदा उनको राजनीतिक भबिस्य पनि जोडिएको छ ।
उनी मात्र होइन गगन थापा जस्ता काग्रेसका युवाहरुले त्यो पार्टी भित्र कस्तो लाइन खडा गर्ने हुन ? यस्ता यक्ष प्रश्नले अबको राजनीति गुजुल्टिएको छ ।
काठमाडौँ – घुस प्रकरणमा मुछिएपछि शुक्रबार राजिनामा दिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकमाथिको कारबाही अन्योलमा परेको छ । सरकारले उनीमाथि छानबिन गर्न चासो ... Read More
नेपालगन्ज । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा वाम गठबन्धनको पक्षमा आउने बताएका छन् । वाम गठबन्धनद्वार सोमबार आयोजित चुनावी ... Read More
NEWER POSTबृद्धको सुन र नगद लुट्ने हिङमाङ यसरी परे पक्राउ
OLDER POSTबाबुराम विजयी, नारायणकाजी पराजित
अब बिर्तामोडमै पाइन्छ विश्वव्यापी लोकप्रिय गाडी